Sida Loo Helo Tigidhada Eurostar Jaban Xataa Daqiiqadaha Ugu Dambeeya
Bogga ugu weyn Sida Loo Helo Tigidhada Eurostar Jaban Xataa Daqiiqadaha Ugu Dambeeya
Dadku waxay jecel yihiin inay safraan laakiin had iyo jeer ma sameeyaan xitaa markay haystaan ​​waqtiga qiimaha tikidhada oo aad u sarreeya awgeed. Kuwa yaqaan Eurostar oo jecel inay adeegsadaan waa tan sida loo helo tigidhada Eurostar raqiis ah iyo qiimo dhimis.
Had iyo jeer waan jeclaa inaan safro oo haddii aan heli lahaa waxa ay qaadanayso waxaan ka bixi lahaa miiskaan hadda oo aan u safri lahaa dalal badan intii suurtogal ah iyo intii suurtagal ah. Laakiin kuwani waa uun rabitaan; haddii rabitaanku yahay fardaha !!
In kasta oo aanan si sax ah u samayn karin waxa aan hadda rabo, haddana waxaan helay qaybtayda caddaaladda ah ee waayo -aragnimada Eurostar. Waan awooday inaan sidaas sameeyo sababtoo ah waxaan ogaaday sida loo helo tigidhada Eurostar raqiis ah. Waa aqoontan aan jeclaan lahaa inaan maanta idinla wadaago.
Maqaalkan, waxaan kula wadaagi doonnaa akhristeyaasheenna sharafta leh, siyaabo xariif ah oo lagu helo tikidhada Eurostar ee raqiiska ah.
Waxaad ka eegi kartaa jadwalkayaga tusmada dulmar guud.
Ku saabsan Eurostar
Eurostar waa adeeg tareen oo xawaare sare leh oo caalami ah oo la aasaasay 1994. Tareenku wuxuu isku xiraa London ilaa Qaaradaha Yurub, tareenadu waxay tagaan Paris, Marseille, Lille, Brussels, iyo kuwo kale oo ka baxa London St Pancras, Ebbsfleet, Iyo Ashford International, dhammaantoodna ay ku shaqeeyaan Getlink.
Eurostar wuxuu noqday habka ugu caansan ee looga safro UK oo loo aado Faransiiska iyo Belgium wuxuuna badiyaa bixiyaa tigidhada ka raqiisan kuwa diyaaradaha. Waqtiga safarku wuxuu qaadanayaa 2 saacadood 15 daqiiqo London ilaa Paris iyo 1 saac iyo 50 daqiiqo London ilaa Brussels taasoo ka dhigaysa adeeg aad u sahlan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan halka ay Eurostar uga safarto London, ka fiiri degelkooda halkan.
Meelaha wicitaanka dhexe ee Faransiiska waa Calais-Fréthun iyo Lille-Yurub, leh tareenada Paris joojinta at Gare du Nord. Tareenada u socda Belgium iyo Netherlands ayaa adeega Saldhigga Midi/Zuid in Brussels, Rotterdam Bartamaha, ka hor intaanad joojin Amsterdam Bartamaha. Intaa waxaa dheer, gudaha Faransiiska, waxaa jira adeegyo toos ah oo ka socda London ilaa Disneyland Paris iyo adeegyada tooska xilliyeed ee koonfurta Faransiiska (Lyon, Avignon, iyo Marseille) xagaaga, iyo Alps -ka Faransiiska xilliga jiilaalka.
Sida Loo Helo Tikidhada Eurostar Ee Jaban
1.Ka Ilaali Iibinta iyo Heshiisyada Eurostar
Waxay ku xayeysiiyaan heshiisyo gaar ah iyo iibinta websaydhkooda, markaa haddii aad jeceshahay inaad ku safarto qaaradda qaddar raqiis ah, markaa ku hay tab website.
Xusuusnow, keligaa ma tihid kuwa raadinaya heshiisyo macaan oo noocaas ah, sidaa darteed si dhakhso leh ayey u iibisaa intii ay xitaa imaan lahayd. Sidaa darteed, waad iska qori kartaa warsidehooda si aad ugu sii jirto xaaladda. Haddii aad seegto iibka, markaa isticmaal kanaalada kale sida…
2. Hore u sii ballanso Tigidhadaada Eurostar Qiimayaasha Ugu Fiican
Shimbiraha hore waxay cabbaan biyo nadiif ah ayay yiraahdaan. Markaa tigidhadaada hore u sii qabso. Tikidhada Eurostar ee jaban waxay ku baxaan $ 40 hal mar ilaa $ 70 tigidhka soo laabashada ee Paris ama Brussels.
Sida laga soo xigtay mareegaha talada tareenka Ninka Kursiga 61, ka jaban tigidhada waxaa la heli karaa oo keliya inta u dhaxaysa duhurnimada Isniinta ilaa saqda dhexe ee Khamiista, iyo inta u dhaxaysa duhurkii ilaa saqda dhexe Sabtida.
XIDHIIDHKA: Degenaanshaha Florida 2022: Sida Loo Noqdo Degane Florida
Waxaad awoodi kartaa inaad tigidh hore goosato maxaa yeelay tigidhaduhu waxay bilaabayaan iibinta 6 bilood kahor taariikhaha bixitaanka. Marka, maskaxda ku hay markaad qorsheynayso fasaxaaga xiga ama safarkaaga ganacsi sidoo kale isku day inaad hore u soo gasho.
Si kastaba ha ahaatee, tigidhada lama soo celin karo, waana inaad bixisaa 30 rodol oo lagu daray farqiga haddii aad rabto inaad beddesho tigidhadaada.
Dadka u safraya Paris, si aad u jarto qarashka tigidhka waxaad marka hore aadi kartaa magaalo u dhow sida Marne-la-Vallée oo dhawr daqiiqo uun u jirta tareenka Paris.
3.Buugga Daahda leh Eurostar Snap
Waxaad ku heli kartaa tigidh ugu yaraan 25 rodol mar walba Eurostar Snap.
Waxa kaliya ayaa ah, tigidhadaani waxay u badan tahay inaysan heli doonin fasaxyada bangiga.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad tikidh kaliya ku ballansan kartaa Eurostar Snap 30 maalmood ka hor bixitaanka oo waxaad u baahan tahay inaad cayimto taariikhda aad jeceshahay inaad baxdo, oo weliba sheeg haddii ay tahay subax ama galab.
Waxay markaa kaxaysan doonaan tareenka saxda ah waxayna kuu soo diri doonaan faahfaahinta bixitaanka 48 saacadood kahor taariikhda kama dambaysta ah.
Isticmaalka Eurostar Snap waa waxoogaa khamaar ah in kastoo.
Haddii aad haysato hal usbuuc oo kaliya Paris oo lagaa saaro tareenka Sabtida 11.30am ee London, waxaad hore u lumisay maalin badhkeed.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku waayi kartaa heshiisyada hudheelada ugu fiican maadaama aad kaliya ballansan karto 30 maalmood kahor bixitaanka.
Tikidhada Snap -ka ayaa kaliya loo heli karaa safarada u dhexeeya London, Paris, Lille iyo Brussels.
Ma rabtaa inaad xoogaa lacag samayso? Akhri: Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsasho Iyo Iibinta Cryptocurrency Sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo
4.Hubi Soo -noqoshada iyo Tigidhada Premier ee caadiga ah
Eurostar waxay leedahay nidaam tigidh firfircoon oo firfircoon. Dalabka tigidhku wuxuu si weyn u saamayn karaa qiimayaasha wuxuuna ka caawin karaa socdaalayaasha caqliga leh inay sameeyaan gorgortan wanaagsan.
Dabcan, tigidhada soo noqoshada badanaa way ka raqiisan yihiin tigidhada kelida ah. Xitaa waa suurtogal in tigidhka soo noqoshada laga raqiisto intii aad heli lahayd laba qof oo kaligood gooni u ballansan.
On Eurostar, badiyaa waa suurtogal in la helo kursi Heer Caalami ah oo kaliya dhowr rodol oo ka badan fasalka Heerka.
Fasalka Premier wuxuu ka kooban yahay kuraas waaweyn, cunto fudud oo qabow, iyo wareegyo cabitaanno aalkolo ah ama aan aalkolo lahayn, sidaa darteed waxay u qalantaa kharash dheeraad ah
5.Waxaad Isticmaali kartaa Kaarka Dhex -dhexaadka ah ama Eurail
The Kaarka InterRail (Rakaabka Ingiriiska iyo Yurub) iyo Eurail (kuwa ka baxsan Midowga Yurub) waxay kugu heli karaan qiimo dhimisyo badan oo Eurostar ah Boosaska Eurostar.
Baasaboorada waxay ku kacayaan meel kasta £ 47 ilaa in ka badan £ 200 taas oo ku xidhan nooca aad rabto (Hal Dal, Caalamka ama Lacag -bixin) sidaa darteed ma mudna in lagu helo safarka Eurostar oo raqiis ah, laakiin haddii aad mid heli lahayd si kastaba ha ahaatee waad badbaadin kartaa dheeraad ah.
Waxaad ka ballansan kartaa Websaydka Eurostar.
6. Noqo Xubin kooxda Eurostar
Ku biiritaanka kooxda gabi ahaanba waa bilaash.
Waxay beddeshay laba qorshe hore, Eurostar Plus Points iyo Eurostar Frequent Traveler.
XIDHIIDHKA: Siyaabo Raqiis Ah Oo Looga Safro Adduunka
Waxay u shaqaysaa si la mid ah qorsheyaasha duulimaadyada ee soo noqnoqda, taas oo aad ku kasbato dhibco lagu bixin karo tigidhada ama hagaajinta.
Farqiga ayaa ah inaad kasbato hal dhibic halkii £ 1 ee aad ku bixisay safarka, halkii aad ka safri lahayd masaafada.
Dhibcahaaga Club Eurostar sidoo kale waxaa loo wareejin karaa American Express ama Le Club Accor Hotels (ama si kale).
Haddii aad ku bixisid £ 2,400 sannadkii ama aad qaadato 32 safar oo soo noqosho ah, waxaad ku biiri doontaa heerka 'Carte Blanche', adiga oo xaq u siinaya helitaanka qol bilaash ah iyo waddooyin degdeg ah.
Waxaad sidoo kale heli doontaa lacag-bixin dijital ah oo bilaash ah oo ah 12-bilood Telegraph.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska.
Goobaha Tigidhada Isboortiga ee ugu Fiican ee Dhigashada Ciyaarta
7. Hubi Kooxda iyo Kaydadka Da'da La Xiriira
Eurostar lacag kama qaado carruurta da'doodu ka yar tahay afar sano mar haddii aysan u baahnayn kursi. Waxay kaloo yihiin qiimo dhimisyada Eurostar ee carruurta ka yar 12 sano, dhalinyarada, iyo socotada kooxda ee da 'walba leh.
Eurostar waxay kaloo siisaa qiimo -dhimis dadka la socda isticmaalaha kursiga curyaamiinta, ee ku safraya heerka koowaad ama heerka koowaad ee ganacsiga.
8.Waxaad isticmaali kartaa Website -ka Cashback ama Kaararka Amaahda si aad u hesho qiimo dhimis/tigidhada jaban ee Eurostar
Websaydhyada sida Quidco or TopCashback mararka qaarkood waxay leeyihiin dalabyo kaa caawinaya inaad lacag dib ugu soo ceshato qarashkii aad ku bixisay Eurostar ka hor intaadan tikidhadaada internetka ku ballansan.
Loco2 sidoo kale waa goob kale, halka aysan ku soo celin lacag caddaan ah lacagtii lagu kharash gareeyay Eurostar, kama qaadaan khidmadda ballansashada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan si dhab ah uga shakisanahay haddii siyaasadani ay wali taagan tahay. Maadaama ay jirto siyaasad cusub oo ku dartay khidmadaha ballansashada tikidh kasta, ma aha UK gudaha.
Hab kale waa inaad lahaato American Express Kaarka Maalinlaha ama Platinum Cashback. Waxaad ka helaysaa dhimis %5 dulsaarrada Eurostar adigoo ku bixinaya kaarkaan saddexda bilood ee ugu horreeya ee isticmaalka.
9.Fiiri Hababka Kale ee Gaadiidka
In kasta oo qof walba lagu hagaajinayo socdaalka Eurostar, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso haddii ay jiraan duullimaadyo la heli karo meeshaad ku socotid iyo intaad ku jirto, xaqiiji haddii laga yaabo inay jaban tahay inaad raacdo.
Shaki kuma jiro Eurostar inay bixiso wax laga yaabo in duullimaadyada badankoodu aysan bixin, sida baasaboorka bilaa boorsada ah, boos shaqsiyeed ka weyn, waxayna xitaa kuu oggolaanayaan inaad cabto cabitaanno.
Laakiin haddii aad ku adag tahay miisaaniyadda, tixgeli marka hore hubinta khidmadaha duulimaadka.
Duulimaadyada miisaaniyadda sida EasyJet iyo Ryanair waxay leeyihiin duulimaadyo jaban meelaha sida Paris, Brussels, iyo Amsterdam sanadka oo dhan.
10.Isticmaal Tareennada Midweek
Haddii aad tahay safar socdaal leh, waxaad ogaan doontaa in tikidhada jaban ee Eurostar ee qof walba raadinaayo inta badan ay tahay tareenada Talaadada iyo Arbacada.
Sidoo kale waa wakhti fiican in la booqdo Paris, oo loo daayo aroortii dadka inay safkooda galaan oo aad naftaada u haysato matxafyada iyo meelaha wax lagu qoro 2 loogu talagalay 1 matxaf dalabka gelitaanka.
11.Eurostar oo leh Heshiisyo Hoteel
Waxaa jira Eurostar tigidhada kuwaas oo lagu iibiyo qayb ka mid ah xirmada hoteelka, soo hel. Waxaad joogi kartaa inta habeen ee aad jeceshahay hoteelka aad dooratay. Tani waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu helo tigidhada Eurostar raqiis ah marka meelaha kale la iibiyo, ama ay leeyihiin qiime aad u sarreeya. Xirmada waxaa laga heli karaa dhammaan meelaha loo socdo Eurostar.
XIDHIIDHKA: 10ka Makhaayadaha ugu Qaalisan Atlanta | 2022
Booqo Heshiisyada Eurostar Wixii dheeraad ah.
12.Dhibaatooyinka Maalinta Jeebka
Waxaa jira shirkado bixiya cheap 1 ama 2 maalmood Eurostar ee London ilaa tigidhada Paris. Qaar ka mid ah shirkadahaani waa shirkado dalxiis oo waaweyn oo iibsada tikidhadooda bilo ka hor qiimo jaban, iyagoo markaa abuuraya qiimayaal tartan ah.
Waxaad ka hubin kartaa midkood halkan.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska 25+ Siyaabaha Ugu Raqiisan Safarada | Socdaal Dheeraad ah & kharash yar
Sida Loo Helo Tikidhada Eurostar ee Jaban Daqiiqadii Ugu Danbeysay
Waxaa jira goobo yar oo bixiya adeegyadan oo ay ka mid yihiin lastminute.com.
Website-kani wuxuu bixiyaa dhammaan noocyada heshiisyada daqiiqadaha ugu dambeeya tigidhada Eurostar ee jaban ee London waana hab wanaagsan oo lagu heli karo tigidhada Eurostar raqiis ah.
Tigidhadu waxay noqon karaan Paris, Marseille, ama Bruges, waxayna caadi ahaan ku daraan hoyga qiimaha sidoo kale. Mararka qaarkood, heshiisyadooda ayaa aad uga jaban websaydhka rasmiga ah ee Eurostar.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli kartaa tigidhada daqiiqadaha ugu dambeeya miiska tigidhada Eurostar ee St. Pancras. Maskaxda ku hay in sida ugu dhow taariikhda safarkaagu u sii qaalisan yahay tigidhada noqon doonaa. Waa fikrad fiican inaad sida ugu dhakhsaha badan u ballansato internetka si aad u hesho qiimaha ugu hooseeya
Eurostar waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo ku habboon baahidaada iyo miisaaniyadda. Haddii aad ku safraysid iftiin ama boorso ama kulan ganacsi ama raaxo, Eurostar ayaa ku daboolay.
Ku raaxayso gelitaanka jaban ee soo jiidashada meelaha aad dooratay oo leh tigidhka Heerka Eurostar. Qaado nuqul ka mid ah majaladda Metropolitan iyo marin u helka Café Metropole.
Ka faa'idayso joornaalo iyo wargeysyo aad u kala duwan, tababarayaal waasac ah, iyo cunto fudud iyo cabitaan miiskaaga la siinayo Eurostar Standard Premier.
Premier Business (Fasalka Koowaad)
Waqtiyada raacitaanka deg -degga ah, tigidhada dabacsan, iyo gelitaanka hoolka ganacsiga ee Premier. Kuraasta Premier Business waxay la yimaadaan liis uu soo diyaariyey kuugga caanka ah ee Raymond Blanc.
Fikradda ugu dambeysa
Mararka qaarkood way fiican tahay in aad u kacdo buur ama degmo, adiga oo ka fog guuxa magaalada wakhti aamusnaan ah kaligaa ama qof aan jecel nahay.
Haddii aad waligaa qorshaysay inaad mid ka mid ah ku samayso waddammada ugu wanaagsan Yurub (Paris, Brussels, London, IWM) markaa waxaan kugu martiqaadayaa inaad adeegsato Eurostar. Tareen xawaare sare leh oo wax badan ku bixiya raaxadaada iyo qanacsanaantaada.
Maxaa Dheeraad ah? Waxaan ku tusnay sida aad uga faa'iidaysan karto safarkaaga safarka adiga oo helaya tigidho jaban meelaha aad dooratay ee Eurostar.
Ku raaxayso fursadahan oo samee xasuus waara.
Sida Loo Helo Tigidhada Baarista Hore ee Filimada Degdegga ah | 6 Hagaha Sharciga ah
20 Goobo Socdaal oo Qiimo -dhimis leh oo Bilaash ah, Huteelo, iyo Tigidhada Jaban
Talooyinka ugu Fiican Sida Loola Dagaalamo Tigidhada Xawaaraha 2022
Lacag lagu siiyo Socdaalka: Shaqooyinka ugu Fiican ee aad yeelan karto
Faallooyinka Caafimaadka IQ ee 2022: Sharci ama Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Degenaanshaha Florida 2022: Sida Loo Noqdo Degane Florida
Haddii aad hadda ku sugan tahay Florida, oo aad rabto inaad hesho dhammaan faa'iidooyinka deganaanshaha halkaas, markaa…
BIibsiga ugu Fiican
10ka Makhaayadaha ugu Qaalisan Atlanta | 2022
Cagaarka cusub ee beeralayda Atlanta, hilibka, iyo cunnada ay udub-dhexaadka u tahay ayaa xoog ku leh wadnaha magaalada, laakiin ma...
Waxaa laga yaabaa 6, 2022
Barashada Ingiriisiga dibadda ayaa si degdeg ah u noqonaysa shaqo aad faa'iido u leh. Waxay ku siinaysaa qofka fursad uu wax ku baro iyo…
Goobaha Kirada Fasaxa ee ugu Fiican 17 | Baadh fursadaha
Arrinta ugu adag ee dadka badankiisu u aado fasaxyada waa qiimaha hoyga. Mid la hubo…
Socdaalku wax badan ayuu bulshada u qabtaa oo aan runtii ogaan karno. Xirfadaha dadka jecel inay…
10ka Hoteel ee ugu Qaalisan Vegas | 2022
Hudheelada ugu qaalisan Vegas maaha meelo kaliya, waa waayo-aragnimo qof kastaa leeyahay. Las Vegas waa…